Blush sisifutshane eshukumayo esitsha esiza kuza kuphela kwiApple TV + | Ndisuka mac
Blush kukufutshane okutsha koopopayi okuza kuphela kwiApple TV +
I-Blush emfutshane yoopopayi sisiphumo sentsebenziswano phakathi kwenkampani yokuvelisa iSkydance yoPhilayo kunye neApple TV +, enyanisweni kunjalo Imveliso yokuqala eshiya isivumelwano ekufikelelwe kuso ziinkampani zombini kwaye ayenzi nto ngaphandle kokuqinisa izixhobo zoopopayi eziya kufika kwiApple TV + njenge Amathamsanqa, I-Spellbound kunye neWolfwalker esele ikho, U-Oscar utyunjiwe ukusuka kwiHollywood Academy.
I-Blush emfutshane yoopopayi ibhaliwe kwaye yayalelwa nguJoe Mateo, Ibhaso likaEmmy kukhetho olufutshane lokuHanjiswa koMhlaba ngo-2009 ukongeza kuma-3 amagama abo batyunjelwe amabhaso ka-Annie, amabhaso kwishishini lezopopayi apho Imovie iWolkwalkers nayo ifumene amagama abohlukeneyo.
UJohn Lasseter kwimveliso yolawulo yale mfutshane, kunye noHeather Schmidt Feng Yanu, oza kwenza imisebenzi yemveliso. UHeather wayekhe wasebenza kwimiboniso bhanyabhanya enje ngebali leToyi kunye neemoto.
Blush ulandela uhambo lwe horticulturist-ngusomajukujuku olahlekileyo emva kokuwa kwakhe emhlabeni kumhlaba ongumqwebedu. Xa kufika undwendwe lwasekhaya, umntu owayefudula ehamba yedwa ufumanisa uvuyo lokwakha ubomi obutsha kwaye uyaqonda ukuba indalo imnike usindiso olothusayo.
Malunga nomhla wokukhutshwa koku kufutshane, U-Apple akazange athethe ngalo mbandela. Eyona nto inokwenzeka, le filimu imfutshane iya kuba phambili kweemovie zeLuck, apho siya khona fumana ilizwi likaJane Fonda. Ngokubhekiselele kwi-Spellbound, kuncinci kakhulu okwaziwayo malunga nesi sihloko. Ukuqaliswa kwezi zihloko zombini kucwangciselwe i-2022.
Emva kweziveliso zombini, kukwakho, UJohn Lasseter, owayeyintloko yeDisney kunye nePstrong oopopayi kude kube ngo-2018, xa wanyanzelwa ukuba ashiye isikhundla sakhe ngenxa yecala lakhe lokuhlukunyezwa ngokwesondo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Blush kukufutshane okutsha koopopayi okuza kuphela kwiApple TV +
"Bukela isandi noMark Ronson" i-Apple TV + docuseries kwitekhnoloji yomculo